သင့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကို တကယ်တန်ဖိုးထားတဲ့ချစ်သူယောက်ျားလေးဆိုတာ… – Trend.com.mm
Posted on March 12, 2019 by Noel
အချစ်ခံရတဲ့ခံစားချက်ဆိုတာ ကိုယ်အိမ်ပြန်ချိန် အိမ်ထိ ဘေးမသီရန်မခအောင်ပြန်ပို့ပေးတာမျိုး၊ကိုယ်ကြောက်နေတဲ့အလုပ်တစ်ခုကို
ရင်ဆိုင်ရဲအောင် ဘေးကနေအားပေးတာမျိုး၊တစ်ခြားသူတွေဘယ်လိုဝေဖန်ဝေဖန် ကိုယ့်တစ်ယောက်တည်းဘက်မှာရှိနေပေးတာမျိုး၊အသေးအဖွဲလေး
တွေက အစဂရုတစိုက်ရှိတာမျိုး စသဖြင့်ပေါ့။ကိုယ့်ဖြစ်တည်မှုကို တကယ်တန်ဖိုးထားမြတ်နိုးတဲ့ချစ်သူယောက်ျားလေးဆိုတာ ကိုယ့်အတွက် အမြဲ
သူအိမ်ပြန်ဘယ်လိုပဲနောက်ကျ နောက်ကျ၊သူ့အိမ်နဲ့သင့်အိမ် ဘယ်လောက်ပဲဝေးဝေး သင့်ကို အိမ်ထိသေချာပြန်လိုက်ပို့ပေးတယ်။သင် အိမ်ပြန်တဲ့
လမ်းတစ်လျှောက် အနှောင့်အယှက်တွေမကြုံရအောင် ၊လုံခြုံစိတ်ချမှုရအောင် သူက သင့်အတွက် တံတိုင်းကြီးသဖွယ်ကာရံပေးထားတယ်။
ကိုယ်တန်ဖိုးထားရတဲ့လူအတွက် အချိန်ဆိုတာအမြဲတမ်းရှိနေပါတယ်။သင့်ကို မနက်တိုင်းဖုန်းဆက်တယ်။ညတိုင်းဖုန်းဆက်တယ်။သင်နဲ့ပတ်သက်တာ
မှန်သမျှ သူအာရုံစိုက်နားထောင်ပေးတယ်။တစ်ချို့ယောက်ျားလေးတွေက နားညည်းမခံနိုင်ကြလို့ စိတ်ရှုပ်စရာလို့မြင်တတ်ပေမဲ့ သင့်ကိုတန်ဖိုးထား
မြတ်နိုးတဲ့သူကတော့ သင်ဒီလိုဂရုစိုက်ကြင်နာမှုမျိုးကိုလိုချင်တာသိတဲ့အတွက် သူတို့ဘက်ကလည်း အမြဲအဆင်သင့်ရှိနေပေးတတ်ပါတယ်။
တကယ်ရင့်ကျက်တဲ့ယောက်ျားလေးတွေဟာ သူတို့ကိုတကယ်ချစ်တဲ့ သူတို့ချစ်တဲ့မိန်းကလေးနဲ့ တွေ့တဲ့အခါ အဲ့ဒီအချစ်ရေးမှာနစ်မြှုပ်လိုက်ဖို့
၀န်မလေးတတ်ကြပါဘူး။ချုပ်ချယ်သလိုခံစားရတာ၊မလွတ်လပ်သလိုခံစားရတာတွေမရှိပဲ သူတို့တကယ်ချစ်တဲ့မိန်းကလေးအတွက် လိုလိုလားလားနဲ့ကို
အချိန်တွေပေးတတ်ပါတယ်။တစ်ခြားဘာကမှ သူ့မိန်းကလေးထက် အရေးကြီးတာမရှိဘူးလို့ခံယူထားသူတွေပေါ့။
ကိုယ့်အပေါ်တကယ်တန်ဖိုးထားချစ်တဲ့သူဆိုတာကိုယ့်မျက်နှာတစ်ချက်အညှိုးမခံပါဘူး။သင့်ကို ငိုတဲ့အကြိမ်ထက် ရယ်မောရတဲ့အကြိမ်အရေအတွက်ကို ပိုများအောင် အမြဲလုပ်ပေးတတ်သူပဲဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ကိုတန်ဖိုးထားချစ်မြတ်နိုးတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ဟာ သင့်ကိုယ်သင်ယုံကြည်မှုရှိအောင်၊သင့်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကို မြန်မြန်ရောက်အောင်
ဘေးကနေအားပေးကူညီပေးနေတတ်ပါတယ်။ကိုယ့်ထက်သာရင် မနာလိုတဲ့ယောက်ျားလေးမျိုးမဟုတ်ပဲ သင်ပြန်လှည့်ကြည့်တိုင်း အနောက်မှာရှိနေမယ့်
ချစ်သူမျိုးကိုပိုင်ဆိုင်ထားရင် အဲ့ဒီမိန်းကလေးက တကယ့်ကို Lucky Girl လေးပါပဲ။
*သင့်ကို ပြောင်းလဲဖို့ မကြိုးစားဘူး
လူတစ်ယောက်ကိုပြောင်းလဲလို့မရပါဘူး။ကိုယ့်ကိုချစ်ရင်ပြောင်းလဲမှာပဲဆိုတဲ့ချစ်သူမျိုးထက် ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်နေမှုကိုသာ တန်ဖိုးထားချစ်ပေးတဲ့
ချစ်သူယောကျာ်းလေးမျိုးကသာ သင့်အနားမှာအမြဲထာဝရရှိနေမှာပါ။သင့်အပေါ်တကယ်ချစ်တဲ့သူဆိုတာ သင့်ရဲ့ ကောင်းတာဆိုးတာတွေကို လက်ခံပြီး မှားနေရင်လည်းလမ်းပြပေးတဲ့သူ၊မှန်တဲ့အခါ ရှေ့ဆုံးက အားပေးနေတတ်သူလည်းဖြစ်ပါသေးတယ်။
စိတ်လုံခြုံတဲ့ခံစားချက်၊ဘယ်သူဘာဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ဘက်မှာသူတစ်ယောက်လုံးရှိနေတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ခံစားချက်မျိုးကို ကိုယ့်ဖြစ်တည်မှုကို တကယ်တန်ဖိုးထားမြတ်နိုးတဲ့ချစ်သူယောက်ျားတွေသာ ပေးစွမ်းနိုင်တာပါ။သင့်မှာရော ဒီလိုချစ်သူမျိုးရှိနေပြီလား? 💗
အခဈြခံရတဲ့ခံစားခကျြဆိုတာ ကိုယျအိမျပွနျခြိနျ အိမျထိ ဘေးမသီရနျမခအောငျပွနျပို့ပေးတာမြိုး၊ကိုယျကွောကျနတေဲ့အလုပျတဈခုကို ရငျဆိုငျရဲအောငျ ဘေးကနအေားပေးတာမြိုး၊တဈခွားသူတှဘေယျလိုဝဖေနျဝဖေနျ ကိုယျ့တဈယောကျတညျးဘကျမှာရှိနပေေးတာမြိုး၊အသေးအဖှဲလေးတှကေ အစဂရုတစိုကျရှိတာမြိုး စသဖွငျ့ပေါ့။ကိုယျ့ဖွဈတညျမှုကို တကယျတနျဖိုးထားမွတျနိုးတဲ့ခဈြသူယောကျြားလေးဆိုတာ ကိုယျ့အတှကျ အမွဲဒီလိုအရာလေးတှလေုပျပေးနတေတျပါတယျ။
အိမျပွနျဘယျလိုပဲနောကျကြ နောကျကြ၊သူ့အိမျနဲ့သငျ့အိမျ ဘယျလောကျပဲဝေးဝေး သငျ့ကို အိမျထိသခြောပွနျလိုကျပို့ပေးတယျ။သငျ အိမျပွနျတဲ့လမျးတဈလြှောကျ အနှောငျ့အယှကျတှမေကွုံရအောငျ ၊လုံခွုံစိတျခမြှုရအောငျ သူက သငျ့အတှကျ တံတိုငျးကွီးသဖှယျကာရံပေးထားတယျ။
ကိုယျတနျဖိုးထားရတဲ့လူအတှကျ အခြိနျဆိုတာအမွဲတမျးရှိနပေါတယျ။သငျ့ကို မနကျတိုငျးဖုနျးဆကျတယျ။ညတိုငျးဖုနျးဆကျတယျ။သငျနဲ့ပတျသကျတာမှနျသမြှ သူအာရုံစိုကျနားထောငျပေးတယျ။တဈခြို့ယောကျြားလေးတှကေ နားညညျးမခံနိုငျကွလို့ စိတျရှုပျစရာလို့မွငျတတျပမေဲ့ သငျ့ကိုတနျဖိုးထားမွတျနိုးတဲ့သူကတော့ သငျဒီလိုဂရုစိုကျကွငျနာမှုမြိုးကိုလိုခငျြတာသိတဲ့အတှကျ သူတို့ဘကျကလညျး အမွဲအဆငျသငျ့ရှိနပေေးတတျပါတယျ။
း တကယျရငျ့ကကျြတဲ့ယောကျြားလေးတှဟော သူတို့ကိုတကယျခဈြတဲ့ သူတို့ခဈြတဲ့မိနျးကလေးနဲ့ တှတေဲ့အခါ အဲ့ဒီအခဈြရေးမှာနဈမွှုပျလိုကျဖို့ဝနျမလေးတတျကွပါဘူး။ခြုပျခယျြသလိုခံစားရတာ၊မလှတျလပျသလိုခံစားရတာတှမေရှိပဲ သူတို့တကယျခဈြတဲ့မိနျးကလေးအတှကျ လိုလိုလားလားနဲ့ကိုအခြိနျတှပေေးတတျပါတယျ။တဈခွားဘာကမှ သူ့မိနျးကလေးထကျ အရေးကွီးတာမရှိဘူးလို့ခံယူထားသူတှပေေါ့။
ကိုယျ့အပျေါတကယျတနျဖိုးထားခဈြတဲ့သူဆိုတာကိုယျ့မကျြနှာတဈခကျြအညှိုးမခံပါဘူး။သငျ့ကို ငိုတဲ့အကွိမျထကျ ရယျမောရတဲ့အကွိမျအရအေတှကျကို ပိုမြားအောငျ အမွဲလုပျပေးတတျသူပဲဖွဈပါတယျ။
သငျ့ကိုတနျဖိုးထားခဈြမွတျနိုးတဲ့ယောကျြားတဈယောကျဟာ သငျ့ကိုယျသငျယုံကွညျမှုရှိအောငျ၊သငျ့ရညျမှနျးခကျြပနျးတိုငျကို မွနျမွနျရောကျအောငျဘေးကနအေားပေးကူညီပေးနတေတျပါတယျ။ကိုယျ့ထကျသာရငျ မနာလိုတဲ့ယောကျြားလေးမြိုးမဟုတျပဲ သငျပွနျလှညျ့ကွညျ့တိုငျး အနောကျမှာရှိနမေယျ့ခဈြသူမြိုးကိုပိုငျဆိုငျထားရငျ အဲ့ဒီမိနျးကလေးက တကယျ့ကို Lucky Girl လေးပါပဲ။
*သငျ့ကို ပွောငျးလဲဖို့ မကွိုးစားဘူး
လူတဈယောကျကိုပွောငျးလဲလို့မရပါဘူး။ကိုယျ့ကိုခဈြရငျပွောငျးလဲမှာပဲဆိုတဲ့ခဈြသူမြိုးထကျ ကိုယျ့ရဲ့ဖွဈတညျနမှေုကိုသာ တနျဖိုးထားခဈြပေးတဲ့ခဈြသူယောကျြားလေးမြိုးကသာ သငျ့အနားမှာအမွဲထာဝရရှိနမှောပါ။သငျ့အပျေါတကယျခဈြတဲ့သူဆိုတာ သငျ့ရဲ့ ကောငျးတာဆိုးတာတှကေို လကျခံပွီး မှားနရေငျလညျးလမျးပွပေးတဲ့သူ၊မှနျတဲ့အခါ ရှဆေုံ့းက အားပေးနတေတျသူလညျးဖွဈပါသေးတယျ။စိတျလုံခွုံတဲ့ခံစားခကျြ၊ဘယျသူဘာဖွဈဖွဈ ကိုယျ့ဘကျမှာသူတဈယောကျလုံးရှိနတေယျဆိုတဲ့စိတျခံစားခကျြမြိုးကို ကိုယျ့ဖွဈတညျမှုကို တကယျတနျဖိုးထားမွတျနိုးတဲ့ခဈြသူယောကျြားတှသော ပေးစှမျးနိုငျတာပါ။သငျ့မှာရော ဒီလိုခဈြသူမြိုးရှိနပွေီလား? 💗
“Stage K” Variety Show မှာ Guest အဖြစ်ပါဝင်သွားမယ့် Red Velvet